Ciidamada Dowladda oo Weeraray saldhig Shabaab ku lahayd Saakow | SAHAN ONLINE
Ciidamada Dowladda oo Weeraray saldhig Shabaab ku lahayd Saakow
MUQDISHO – Xafiiska Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa war kasoo baxay lagu sheegay in uu amar ku bixiyey maanta in weerar qorsheysan lagu qaaday saldhig ururka Al-Shabaab ku lahaayeen ddegmada Saakow ee gobolka Jubada Dhexe.
Qoraalka Madaxtooyada kasoo baxay ayaa lagu sheegay in hawlgalkan ay fuliyeen ciidamada Soomaaliya ee sida gaarga ah u tababaran oo taageero ka helaya ciidamada kale ee caalamiga ah.
Waxa lagu sheegay qoraalka in ciidamadu bartilmaameedsadeen saldhiga Al-Shabaab u ahaa goob tababar,iyadoona hawlgalkaas uu u dhacay si guul leh isla markaana lagu burburiyey Taliskii Al-Shabaab iyo weliba isku xirkii sahayda.
Qoraalka Madaxweynahu soo saaray ayaa lagu sheegay in tank ay si weyn u dhaawacayso awooddii ururka Al-Shabaab u yeelan lahaa in uu weeraro cusub ku quad meel kamid ah Soomaaliya.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in arrinta amniga ay mudnaanta koowaad tahay Xukuumaddiisa isla markaana weerarkan uu kor u qaadayo ammaanka hoosna u dhigayo weeraradii ururka Al-Shabaab.